Al-Shabaab oo soo bandhigay maxaabiis Kenyan ay gacanta ku hayaan, sheegeyna inay dilayaan – idalenews.com
Al-Shabaab oo soo bandhigay maxaabiis Kenyan ay gacanta ku hayaan, sheegeyna inay dilayaan
Xarakada Al-SAhabaab ayaa muddo saddex todobaad u qabatay dowladda Kenya inay ku sii deyso maxaabiista Muslimiinta ee ku xiran xabsiyada dalkeeda, iyadoo soo bandhigtay muuqaal dad u dhashay Kenya oo maxaabiis ahaan gacanta ugu hayaan.
Muuqaalkan oo la soo dhigay barta Twitter iyo bogaha kale ee internet-ka ee taageera Al-Shabaab ayaa waxaa ka soo muuqday ilaa lix muwaadin u dhashay Kenya, kuwaasoo sanadii hore laga soo qafaashay gudaha dalkaas.
Filmkan oo muddo kooban socday ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay heysato laga bilaabo saqda dhexe ee caawa taariikhdu ku beegan tahay 24-1-2013 ilaa 14-2-2013, hadii aysan sii deyn maxaabiista xabsiyada ku jira inay dili doonaan muwaadinteeda.
Shuruudaha lagu xiray sii deynta Maxaabiista kenyatiga ayaa waxaa ka mid ahaa hadii ay doonayaan nolosha maxaabiisteeda in ugu horeyn ay sii deyso maxaabiista Muslimiinta ee u xiran sababo la xiriira waxa loogu yeero la dagaalanka Argagixisada.
Sidoo kale waxaa la faray inay sii deyso dadkii loo qab qabtay weerarada ka dhacay Kampala sanadkii 2010, kuwaasoo Kenya ay u gacan gelisay dowladda Uganda.
Al-Shabaab ayaa ugu baaqday Kenya inay cadeyso sii deynta maxaabiista, isla markaana aanay wax shuruud ah ku xirnaan, taasoo aan la ogeyn go’aanka ay ka qaadan karto dowladda Kenya.
Nin ka mid ahaa maxaabiistii u hadashay dadka Kenyan ee gacanta ugu jira Al-Shabaab oo lagu magacaabo Mulle Yesse ayaa ugu baaqay dowladda Kenya inay ka howl gasho sidii ay xoriyadooda, waxaana uu ka dalbaday in loo fiiriyo sii deyntooda danaha guud ee ay shacabka dalkooda u qabteen.
“Waxaa idinka ka codsanayaan waa inaad tixgelisaan Shuruudaha Al-Shabaab si aan anagoo bad-qabna dib ugu soo laabano wadankeena, Sida labada Musharax-Madaxweynayaal ee kala ah Uhuru Kenyata iyo William Rutu inta ay khilaafaadkoodii meel iska dhigeen ay awoodoodii u mideeyeen, waxaan ka baryaynaa Shacabka Kenya, Warbaahinta Kenya iyo Dowlada Kenya in ay dadaalkooda mideeyaan si aan Xoriyadeena dib ugu helno”ayuu yiri Mulla Yesse.
Ugu dambeyn Al-Shabaab ayaa sheegay in hadii Kenya mudada saddexda todobaad ee ay heysato ku sii deyn waayaan maxaabiista u xiran ay dili doonaan muwaadiniinteeda ay gacanta ku hayaan.
Munaasabada dhalashada NMNNKH oo xalay lagu qabtay Muqdisho iyo gobolka kale ee dalka